ကို CANON LBP 6020 ဘို့ DRIVERS တွေကို DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
ပရင်တာကို Canon i-SENSYS LBP6020 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
ကြောင့် Canon ၏ယာဉ်မောင်းကနေရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၏လူကြိုက်များဖို့ကမခက်ခဲသည်ကိုရှာပါ။ နောက်ထပ်အရာ, ထိုမေးခွန်းကို operating system မြားကို Windows7အကြောင်းလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီ OS ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာဒီရှုပ်ထွေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ကို Canon LBP6020 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လေးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အားလုံးရရှိနိုင် options များဆက်သွယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ဦးမစတင်မီတည်ငြိမ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့အင်တာနက်ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေဖြစ်ကြသည်။ ယခုငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Method ကို 1: Canon ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်
အများအပြားအသုံးပြုသူများသည်ပင်တရားဝင်အရင်းအမြစ်ကို Canon အပေါ်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ကြည့်ဖို့မစဉ်းစားကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Viewed ပရင်တာ, အတော်လေးဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပယ်ထားကြ၏, ဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ပံ့၎င်း၏မူဝါဒအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော, ဒါ LBP6020 များအတွက် software ကိုယခုကုမ္ပဏီ၏ website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုအခါကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "Downloads နှင့်အကူအညီများ" ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသွား။
, စာမကျြနှာ, ရှာဖွေရေးယူနစ်အောက်ကိုဆင်း, နှင့်ကိရိယာ၏နာမကိုအမှီရိုက်ထည့် LBP6020။ သူတို့ကိုတို့တွင်တပ်မက်လိုချင်သောအပရင်တာကို Select လုပ်ပါ - ရလဒ်များကိုချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ ကြောင်း LBP6020B မှတ်ချက် - လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ!
အဆိုပါပရင်တာထောက်ခံမှုကိုဖွင့်။ ဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်ခြင်းမပြုမီသင်၏ operating system နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာလုပ်နေတယ်ပေမယ့်ဒီ parameters တွေကိုမရွေးနိုင်ပါသည်နှင့် - ရုံ drop-down menu ကိုခေါ်ပါနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအနေအထားပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါသင် download, drivers တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှအောက်ကိုဆင်း "တချို့ယာဉ်မောင်း" နှင့်ရရှိနိုင်ဆော့ဖ်ဝဲစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စကားလုံးအရှည်၏ operating system ကိုဆော့ဖ်ဝဲ၏တစ်ဦးတည်းသာ version ကိုရရှိနိုင်ပါသည် - Find နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Upload လုပ်ပါ" ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်အောက်မှာ။
ရှေ့ဆက်ရန်, သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ငြင်းဆန်၏ကြေညာချက်" နှင့်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လက်ခံ "Accept and download".
Installer ကိုယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ က installation ကိုအဆုံးသတ်နှင့်စတင်ရန်အဘို့စောင့်ဆိုင်း - သငျလုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်မှပရင်တာကိုချိတ်ဆက်သာလိုအပ်ပါတယ်။
Method ကို 2: Third-party ထုတ်လုပ်သူများထံမှဆော့ဗ်ဝဲယာဉ်မောင်း
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆိုပါကအသုံးဝင် Third-party အစီအစဉ်များ-drayverpaki လွတ်လပ်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်ယာဉ်မောင်း load နိုငျသောရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဒီ application ကိုအလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေပြီးကတည်းက, DriverPack Solution ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ပိုများသော: အ DriverPack Solution ထဲမှာ drivers တွေကို Download လုပ်ပြီး install
၏သင်တန်း, ရှေးခယျြမှုကဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ် - စျေးကွက်ပေါ်မှာဤလူတန်းစား၏အခြားထုတ်ကုန်များရှိပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးသူတွေနဲ့အတူသငျသညျကိုအောက်ပါဆောင်းပါး၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
Read more: ထိပ်တန်း drayverpaki
Method ကို 3: ID ကိုပရင်တာ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိကိရိယာဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်၏နောက်ထပ်နည်းလမ်းပင် Third-party software ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါဘူး - အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည့်ပရင်တာ၏ ID ကိုသိရန်မယ့်အလုံအလောက်:
ဒီ code ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုတွေ့ကားမောင်းသူသာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, အထူးသယံဇာတအပေါ်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသီးခြားဆောင်းပါး၌ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
သင်ခန်းစာကို: ဟာ့ဒ်ဝဲ ID ကိုသုံးပြီးယာဉ်မောင်းရှာရန်
ဖြစ်စဉ်ကို 4: စနစ်များနည်းလမ်းများ
, အမည်ရ - မကြာသေးခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ယနေ့ built-in windose tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် "Device Manager"။ ဒီ tool ဟာအာဆင်နယ်အသင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်ရှိပါတယ် "Windows Update ကို"certified ရရှိထားပြီးပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးများအတွက်ယာဉ်မောင်းတည်ရှိသည်ဘယ်မှာ။
ဒီ tool ကိုသုံးပါရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုသောကွောငျ့အခကျအခဲမြား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများ, အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပြင်ဆင်ကြပြီ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: "Device Manager" ၏နည်းလမ်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်း Install
ငါတို့သည်သင်တို့ပစ္စုပ္ပန်နည်းလမ်းများအဘယ်သူအားမျှမဆိုတိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အသိပညာပေးဖို့အသုံးပြုသူလိုအပ်ပါဘူး, ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ယင်း operating system ကို Windows7အတွက်ပရင်တာကို Canon i-SENSYS LBP6020 များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မရရှိနိုင်ပါအပေါငျးတို့သ options များကြည့်ရှု။